Anotendeuka kubva Kukundikana mufananidzo? Kuziva munhu zvakavanzika shoma, iwe uchava risingadzivisiki mumifananidzo
Arts uye Entertainment, Chinooneka ndimi
Uchida kuvandudza nzira imi kutarira mifananidzo? Uchida kuvandudza Self, izvo zvaunoita woga? Pano zvikonzero pfumbamwe nei haukwanisi chaizvo zvakanaka mifananidzo, uyewo pfumbamwe mazano pamusoro sei kuchigadzira uye kuti mapikicha enyu zvikuru anoyevedza. Unofanira kurangarira kuti runako - ichi hachisi neMhedziso pfungwa, kunyanya kana totaura mapikicha. zvakavanzika izvi kuchakubatsira nechokwadi chokuti mapikicha enyu chete anotyisa. imi mose vanoda - zviri zvishoma nesimba rinoshandiswa panguva kutora mifananidzo yetumedu. Uye imi muchava kushamiswa sei richachinja aunoita mifananidzo.
Chiduku kupfura angled
The gogorosi inofanira kuva pamusoro mwero nemaziso ako kuti awane zvakanaka. Chero kubata kamera zvishoma yepamusoro, kana muchiita chinhu selfie, kana kukumbira munhu iwe mufananidzo, mutsigirire kamera zvishoma kwirirei. Unogonawo kuwana mamwe yakakwirira kana wakarerekera mabvi ako zvishoma equalize zvinhu. Uyewo, unofanira kuteura musoro wako mberi zvishoma, nokuti hapana munhu anoda kutarisa iwe mumhino.
Imi muri pedyo kana kure
Munhu anogona kutarisa zvakasiyana, zvichienderana kure pakati payo uye izvo. Ndokusaka vanhu vakawanda vanofunga vanotarira zvakanaka pavanenge mugirazi, asi tarisa anotyisa mune mapikicha. Kuti tiwane kure yenyu yakanaka, kumbira shamwari kutora kuti akasiyana akareba zvokuti munhu akanga akaenzana mumufananidzo. Zvadaro dzokororai zvabuda uye sarudza uya kuti uchida kupfuura. Kana usingade basa prodelyvat zvakawanda, unogona kuderedza pasi kutsvaka wako matatu pfungwa: pedyo, svikiro uye zvenguva refu. Kana iwe unoziva kure yako yakanaka, unogona kuramba kukumbira mifananidzo kuti pedyo kana kuenda kutora mufananidzo wenyu.
Meso enyu regai kunyemwerera
Zviri pachena, unoda kunyemwerera mune mapikicha, asi muchiitiko chino maziso hazvina kukosha pane pamiromo. Meso enyu uye kunyemwerera, edza imwe yakakurumbira unyanzvi. Kana kupfura, edza kujekesa meso ake, achishandisa chete rezasi fungiro. Top kana Zvinofanira kuenda pasi chete zvishoma. Edza kuita izvozvo pamberi mugirazi uye uchaona zvikuru sei nechivimbo uye inokwezva munotarisira.
muviri wako uri isiri nzvimbo
Kana kuti mufananidzo chake uye mapfudzi pamberi, mugumisiro chingaratidzika sezvinoita Snapshot, rinoitwa nemapurisa. Kubvisa iyi maturo, vashoma chaizvo kutsaukira kamera pamwe chete ruoko. pamapfudzi ako anofanira kuva madhigirii anenge 30 hama kuti izvo, pane 90. Uyezve, kana iwe usiri kufara nenzira mapikicha enyu zvitange kufuta, unyanzvi ichi achakuisa slimmer mumifananidzo. Uyewo, unofanira kutora zvishoma shure uye akakotamisa mapendekete kuti mutsipa wako akacherekedza refu, izvo zvinoita kuti kutarira mifananidzo zvinoyevedza.
You kunyemwerera yakarebesa, uye anotarisa shamisa
Hazvina chakavanzika kunyemwerera kwenguva refu nguva yokuti chikwata - hazvisi nyore. Paunoramba kunyemwerera, zvikuru nyepera kunyemwerera anotarira. Saka unofanira kukumbira mifananidzo kuverenga kwamuri achinyemwerera yose yokudzidzisa nguva, uye vakaita saizvozvo chete vaviri mumasekonzi.
Iwe havana kugadzirira
Kana iwe kupfura, unofanira kuzvipa kufunga kwako zvizere kudzivisa kwepfuti, idzo vasinganzwisisiki muromo wake kana apo maziso ako kutarira kupenga. Usatarisa kure kamera. Usakanganiswe nevanhu vari kuedza kutaura newe. Musaedza boira. Just kutora pikicha uye wabvunza nemasekonzi shoma, pasina kubhadhara chinhu nzeve kuti.
Iwe wakaita chiso
Kana uchida kuti pikicha kuti zvichaita kuonekwa kuti hamuna basa sei iwe tarisa, unogona kuita chero zvaunoda nechiso chenyu. Asi unofanira kuziva kuti unoedza kuratidza rurimi, kuti zviso, pout kukuita kutarisa benzi, uye ndizvo anoratidza avo mapikicha kuti unodada, uye avo yawakatarira, grinning uye rashai kumbobvira kwavari kwete kutarisa. Dzivisa kuti chiso, kana kana iwe usingagoni kubatsira, kumbira mifananidzo kuti kurira kwepfuti kaviri: rimwe Qualitative uye vamwe zvishoma chakakomba. Zvadaro unogona enzanisa navo uye ona ndeupi seshamwari dzako.
Makaita mufananidzo uye zvikasadzorwa chii chakaitika
Usatya kukumbira mumwe mufananidzo kana uchifunga kuti kutanga iwe hauna kubuda. Kakawanda vanhu vanogona chete boira kana kuita chimwe chinhu chingaita kuti Anotadzira pamatanda musingaiti nemaune. Kumbira kutarisa zvakaitika kuona kana uchifarira mugumisiro. It zvinoenderana zvakanaka sei chichava kwokupedzisira vapfurwa.
Rinongova wako kwete
Vamwe vanhu havana kufanana kuitwa mifananidzo. Asi kana iwe unoziva kuti uchine kutora mufananidzo, unofanira kubvuma chokwadi ichi. Kana ichi hazvingadziviswi, zvinokosha kuva nechokwadi kuti kutarisa zvakanaka mifananidzo. Kazhinji, vanhu havadi kuti mifananidzo, nokuti vanofunga vanotarira yakaipisisa mumifananidzo, uye vane kusanyatsozviremekedza. Kana usiri kuita chero nesimba, iwe musingadi kuwana achida mugumisiro. Izvi zvinoshanda vose mapikicha uye zvose muupenyu. Kana ukaverenga mazano aya, edza kunzwisisa navo uye kushandisa, uye ipapo iwe uchagona nani akagadzirira mune mapikicha.
Sei kuwana Pirate yakajeka uye shamisa
How kuronga firimu: tsananguro, nzira, mazano anoshanda uye mazano
Rapid kupfura - nokukurumidza. Film kana vhidhiyo vaipfura ine kakawanda 32 kusvika 200 mapuranga muzana wechipiri. Professional videography
Wedding mifananidzo kana nzvimbo muchato ufambe
Scientific kuedza nemvura vana: zvokusarudza
Sei kudzidza waltz?
Nemakwenzi: Marudzi, mudziyo, chirimwa, chirimwa, Photo
Komondor (Hungarian sheepdog): erudzi description, hunhu uye pikicha
Ndeipi kufinhikana inoungana?
"Zopiclone": mirayiridzo manual, wongororo, mutengo
"White Hills" - nheyo yekubata muAstrakhan
Mitambo uye Kururama
Chokwadi nenhema mumutambo "The Lower makadzika" Gorky
Mapere vanopiwa mune nzvimbo yakasiyana
How kutsanangura chii anoponesa mu nhabvu?
Kurovedza nokuda kwemashoko ruoko pashure pakakuvara. Rehabilitation pashure kutsemuka
Golubitskaya musha - zororo. Kuzorora Mugungwa Azov
Database - a date utariri hurongwa
Hotels in Gurzuf: kero, description, wongororo. Rest muna Gurzuf